Fiverenan’ny mpianatra an-tsekoly : Nojerena manokana ny fepetra sakana tsy iparitahan’ny valanaretina covid-19 – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:15
Accueil/Fanadihadiana Manokana/Fiverenan’ny mpianatra an-tsekoly : Nojerena manokana ny fepetra sakana tsy iparitahan’ny valanaretina covid-19
Manoloana ny fiverenan’ny mpianatra hiditra an-tsekoly anio. Samy nametraka ny fepetra sakana tsy iparitahan’ny valanaretina covid-19 ireo tomponandraikita isan-tokony. Nisy koa ny fanomezana fanampin-tsakafo ireo mpianatra kilasy fahadimy. Tsy nohadinoina ny fanomanana ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana…
Rado Harivelo 2 juin 2021
Sekoly maro no namendrahana fanafody andraisana ireo mpianatra.
Niomana amin’ny fiverenan’ireo mpianatra rehetra manerana ny Nosy, ny sekoly na ny Oniversite, na ireo toeram-piofanana isan-karazany, araka ny kabarin’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, ny alahady lasa teo. Ho an’ny Fitaleavam-paritry ny Atsinanana, efa nanao hetsika famendrahana faobe izy ireo, tamin’ireo sekoly handray ireo mpianatra hiverina an-dakilasy. Io hetsika famendrahana faobe io, izay niarahana tamin’ireo “Agent hygièniste” ny Dren Atsinanana, isorohana ny tsy hiparitahan’ny valanaretina coronavirus, ny herinandro lasa teo. Marihina fa ireto farany moa, dia efa nomena fiofanana manokana amin’ny fomba famendrahana, fanafody. Niara-nisalahy nanatanteraka izany, teo ihany koa DREAH Atsinanana ary ny kaominina tao Toamasina. Sekoly miankina sy tsy miankina miisa 15 no efa natao, izay niarahana tamin’ireo mpiara-miombona antoka. Ankoatra izay, efa tonga soa aman-tsara koa ny « Ferrozinc C Caps » miisa 27 baoritra, izay avy amin’ny Fikambanana Fitia. Marihina nozaraina amin’ireo mpianatra T5, izay hanala fanadinana CEPE ao Atsinanana no nanomezan’ny Fikambanana Fitia, tarihin’ny vadin’ny Filoha, Mialy Rajoelina. Ankoatra izay, notanterahina omaly koa ny fanombohana fanomezana fanampin-tsakafo ho an’ireo mpianatra kilasy fahadimy, ao amin’ny Fitaleavam-paritry ny Fanabeazana Vakinankaratra. Tao amin’ny EPP Garbi, Cisco Antsirabe I no nanaovana ny fanolorana ofisialy, ary efa naparitaka any amin’ireo Cisco manerana ny Faritra izany. Ny « Association » FItia no nanolotra ireo fanampin-tsakafo « Ferozinc capsules» ho an’ny mpianatra ireo. Ankizy miisa 10.100 no hisitraka izany fanomezana izany, ka boaty iray ho an’ny mpianatra iray.
Niatrika fanadinana CEPE andrana…
Isan’ireo boky nozaraina hanampiana ireo mpianatra hiatrika fanadinana.
Efa nambaran’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fa tsy maintsy misy toerana fanasana tanana ny sekoly tsirairay, ary mila famendrahana fanafody isan’andro. Tsy izay ihany fa mbola hisy koa ny komity misahana ny fahasalamana , hanara-maso ny fahasalaman’ny ankizy tsirairay any am-pianarana, hisorohana ny mety ho fihanahan’ny valanaretina covid-19. Ho fanampiana ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana, ho an’ny Cisco Ihosy, dia efa niatrika ny fanadinana CEPE andrana 2021 ireo mpianatra nanomboka omaly. Ao anatin’ny fiomanana ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE amin’izao fotoana izao ireo Fitaleavam-paritry ny Fanabeazana rehetra. Efa tonga rahateo ny laza adina izay natontann’ny tranom-pirity Fianarantsoa. Efa manomboka ny fanaparitahana izany eny anivon’ny sekoly. Nezahina naparitaka koa ny ”Livret auto-apprentissage” sy ny ”Fascicules EPS” ary ireo fandaminana ny adina ara-panatanjahantena EPS amin’ny BEPC. Izany no natao handaminana ny fiatrehan’ny mpiadina am-pitoniana ny fanadinam-panjakana.
Nampitomboina ny efitrano nandraisana mpianatra
Ny Tale mpandrindra ny FLTC Madagascar, Randriamamonjisoa Bruno.
Ankoatra ireo sekoly, isan’ireo niverina manohy ny fianarana koa ireo ivon-toeram-piofanana momba ny fianarana tenim-pirenena vahiny. Ho an-dRandriamamonjisoa Bruno, Tale mpandrindra ny FLTC Madagascar etsy Tsaralalàna, dia nanambara fa « voatery nampitomboina ny efitrano andraisana ireo mpianatra, kanefa nahena ny isan’ny mpianatra raisina isaky ny efitrano. Raha 35 ny isan’ny mpianatra noraisina isaky ny efitrano, voatery nahena 15 ka hatramin’ny 20 izany sisa, ho fanajana ny fepetra sakana, tsy iparitahan’ny valanaretina coronavirus ». Nasongadiny fa ho fitsinjovana ny fahasalaman’ny mpianatra hianatra teny anglisy sy teny frantsay, dia tsy maintsy nampitomboina ny isan’ny mpampianatra sy ny efitrano nandraisana ireo mpianatra. Raha efatra ireo mpampianatra teo aloha, lasa valo izany ankehitriny, satria maro ireo mpianatra mangetaheta fahalalana, kanefa tsy maintsy atrehina koa ny valanaretina coronavirus. Ho an’ity ivon-toeram-piofanana ity, dia manaja hatrany ny elanelana iray metatra sy ny fampiasana ireo « gel désinfectant » isorohana ny fiparitahan’ny valanaretina.
FANDRIAM-PAHALEMANA-TAFIKA MALAGASY: Roso ny fanavaozan-drafitra hanakaikezana vahoaka